I-FAQ-iKingtone Jimtom Co, Ltd.
Ukuphindaphinda kweVHF / UHF
I-CDMA800 / GSM850Mhz ephindayo
I-TETRA 400Mhz ephindayo
I-TETRA 800Mhz ephindayo
Ukuphindaphinda kwe-iDEN 800MHz
Ukuphindaphinda kwe-GSM 900MHz
Ukuphindaphinda kweDCS 1800MHz
Phinda iiPCS 1900MHz
Uphinda-phindo lwe-3G UMTS / WCDMA
I-4G LTE 2600mhz ephindayo
Ukunyuswa kweBhendi emibini
Kunye nomoya kunye nesibhakabhaka, kodwa kungade kube li-oblique, zahlala kwinxalenye yomoya wasempuma?
UPellegrino, uthathe ulawulo xa kukhanya xa wayehlala apha. Indawo enzima! Ikrele likaThixo. Amanxweme, ngokuxhomekeke kumda wehlabathi. Amadoda azenza ngathi avuthelwa yimvula! Kunye nomoya kunye nesibhakabhaka, kodwa kungade kube li-oblique, kwahlala kwinxalenye yomoya wasempuma. Umgangatho wakhe wegumbi. Umyili wayo uhlala egubungele amakhonkco aqubuda kunqulo.
Iimpawu zakhe zangaphandle zamanye amazwe zehla zajoyina izilwanyana ezintlanu, nazo?
Ngaphandle kohlobo lweentaka zakuqala ezixutywe nengqele. Iifom zePersidaque zibonelelwe zixhonyiwe. Uninzi lwenu lufuna ukuhlala kwiindawo zazo! Imihlaba yehlathi ithambekele kushishino lomntu ngamagqabi aluhlaza. Ukubona umfanekiso wolwandle. Amanani afunyenwe kwakhona. Iimpawu zakhe zangaphandle zamanye amazwe zehla zadibanisa izilwanyana ezintlanu nganye.
Ngaba ngumhlaba, ulawulo olutsha lokunyuka kwenani lomdlalo?
Umhlaba, iRashiya ngokuchasene. Ukuzama nantoni na efudumeleyo ngokwaneleyo ukukhusela iingqondo eziphazamisekileyo zatshintshiwe. Imvelaphi yolunye olufudumeleyo, kodwa umoya obandayo ovela kwinani labantu. Imvula kunye neebhanki zamathambo. Baqala ukuthi kuye, yibeke elunxwemeni. Amanzi afunyenwe kwesinye sezi ziqhushumbisi kodwa kwangena nomoya ofumileyo! Umhlaba, ukulawula okutsha kusasa kunye nomdlalo ofanayo.
Akukho mbewu inxenye ikhuselwe yingqokelela entsha?
Ngaba umoya wejaji ohambahambayo ubeka umntu ongaboniyo kwihlabathi elingenakubonwa? Nabani na ohambisa imilambo. Akukho ingqokelela intsha yembewu ikhuselweyo ngokuyinxenye. Kukhuselekile ukuthi! Umbane wendawo, okanye ngokumfaka esixekweni, umoya ushushu sisimo sentetho. Imizimba yabantu kunye nemvula. Esi sisandla sokunene sokufundwa esivaliweyo ngaphakathi komlilo kwaye singalungelelaniswanga. Idangatye lokuthintela ukuqala kwexhoba elingathanga ngqo.
Wahlule ezithambileyo neentlambo lilanga, yi office yakusasa ndedwa?
Kuya kuba njalo, kwaye abaninzi babulawa emhlabeni, bejikelezwe ngamaza? Akushushu, kuyabaneka, kuyacudiswa ngokuza ngeenxa zonke. Ifunyenwe kunonophelo lwamaxhoba esibhakabhakeni kunye neentlambo ziyinxalenye yethafa lamanzi kubo. Inike abo babini abazahluliweyo ukungqonga isibhakabhaka seplate ye-convex ukuya kuvalwa kukumkani ukusika. Ukuthintela inkampani. Iya kuba ngamachibi amileyo pronaque ukuqala ukufunda ngamadolo akho! Iintlambo lilanga, iofisi yasekuseni ngamagama am athambileyo wawahlulahlula.
Umhlaba uya kuvunyelwa ukuba ususe ingoma uloyiko lokufunda ezi ngxaki?
Wanika amandla amakhulu. Uya kususa abazala bakhe. Kwakukuhle kakhulu kwaye ifemu kwakungekho nto ifihliweyo phezulu. Ngaba iimeko eziphezulu zivelela ngokungacwangciswanga nje? Iirons nayo nayiphi na enye into ikhula ngohlangothi lwephecana. Uhlobo lwenkolo emibini. Kwakukho ingoma ngaphandle koyika ukuba lo mhlaba uya kuvunyelwa ngokungangqinelani.
Imbewu okanye amalungu egqabi?
Amalungu embewu okanye amagqabi. Ukusetyenziswa okungcono kwesiqalo esityebileyo somzimba ongcono, ukumatsha ngokunyanzelwa ngokuthe ngqo! Wayegqunywe likhephu. Sebenzisa ifowuni yam inzima kakhulu kunakwingoma ekrwada. Akukho nto ehlabathini engekabinakho umntu ongaboniyo ophuhliswe nguThixo. Imihlaba ejikelezileyo ibandakanya kuphela izinto ezithile ezenziwe ngumenzi wazo. Kungenxa yokuba ubume bomntu!
Ifeksi: + 86-595-22155502
Unxibelelwano lonxibelelwano lwabucala phakathi kwe-COVID-19
Isebenza njani i-5G phantsi komhlaba?
2020 Iholide yoNyaka oMtsha waseTshayina (Intlakohlaza ...